BRICS နိုင်ငံများက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကူညီပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားပညာရှင်ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် ရှမန်မြို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် BRICS စက်မှုတော်လှန်ရေးအသစ်ပြပွဲအတွင်း ဂျက်လေယာဉ်၏ ပုံစံငယ်များအား ပြသထားစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ ဇွန် ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
BRICS နိုင်ငံများသည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား သိသိသာသာကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။BRICS သည် ဘက်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၊ ပွင့်လင်းပြီး မူမတူယှဉ်တွဲမှု လက်ခံသော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ၊ အားလုံးပါဝင်သောတိုးတက်မှု နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ထိန်းသိမ်းရန် အမြဲတမ်း ကတိပြုခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယား တော်ဝင်အကယ်ဒမီရှိ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kin Phea က တရုတ်နိုင်ငံက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည့် ဇွန်လကုန်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ ပြောကြားခဲ့သည်။
BRICS သည် ဘရာဇီး ၊ ရုရှား ၊ အိန္ဒယ ၊ တရုတ် နှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများ အုပ်စုဖွဲ့ထားသည့် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်အုပ်စုအတွက် စကားလုံးအတိုကောက် ဖြစ်သည်။ စုပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ယင်းအုပ်စုသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ကိုယ်စားပြုပြီး ကမ္ဘာ့ GDP ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ BRICS New Development ဘဏ် ရုံးချုပ်အဆောက်အဦအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“BRICS နိုင်ငံစုံပါဝင်မှုက ယနေ့ ကမ္ဘာ့စနစ်သစ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။”ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kin Phea က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာစတင်ကတည်းက BRICS နိုင်ငံတွေက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အားလုံးပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရဲ့ အဓိကအင်ဂျင်တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် တွန်းအား ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kin Phea က BRICS ဘဏ်အဖြစ်သိကြသည့် New Development ဘဏ်ထူထောင်ခြင်း နှင့် မကြာသေးမီက စတင်ခဲ့သည့် BRICS ကာကွယ်ဆေး သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာ အပါအဝင် BRICS ၏ ထူးခြားသောအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
“ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက COVID-19 အလွန် စီးပွားရေး နလန်ထူမှုကို မြှင့်တင်ရေး နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းရေးအတွက် အားကောင်းတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ခိုင်မာအောင် ကြိုးပမ်းဖို့ BRICS အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ရလဒ်က BRICS နိုင်ငံတွေအတွက်သာမက အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအပြင် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။”ဟု ပညာရှင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ BRICS ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် BRICS ပွင့်လင်းမှုစိတ်ဓာတ် ၊ အားလုံးပါဝင်မှု နှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှုကို မြင့်တင်ရာတွင် ယင်းအခါသမယကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်ပြီး နယ်ပယ်အားလုံးတွင် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေကာ BRICS ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ခရီးသစ်ကို စတင်သွားမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက BRICS အုပ်စုအတွင်းမှာ အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ နဲ့ ကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်ပြီးတော့ တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ အခြား BRICS နိုင်ငံတွေအကြား ကုန်သွယ်မှု နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေက သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အလွန်အားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေ ပေးပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အခြား BRICS နိုင်ငံများနှင့်အတူ စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးအား ဆက်လက်နက်ရှိုင်းစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမသေချာမရေရာမှုများ မြင့်တက်လာခြင်းအား ကူညီပေးရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်အား ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဟု ၎င်းက ယုံကြည်ခဲ့သည်။
“BRICS Plus က နိုင်ငံစုံပါဝင်မှု နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရဲ့ စစ်မှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ထင်ဟပ်ပြီးတော့ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်တွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ရှင်သန်မှုကို အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက မကြာသေးမီက အဆိုပြုခဲ့သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရှင်က မှတ်ချက်ပြုရာတွင် ယင်းအတွေးအခေါ်သည် သာတူညီမျှဖြစ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ခိုင်မာသည့် အခြေခံအုတ်မြစ်ချမှတ်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဆိုပြုချက်သည် ထိပ်တိုက်တွေ့မှု နှင့် အကျိုး အမြတ်လုံးဝ မရှိသော ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း ၊ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး နှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှုရလဒ်များနှင့် အစားထိုးမည့် လုံခြုံရေး ပုံစံသစ်တစ်ခုကို အားပေးမြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအဆိုပြုချက်သည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ် စာတမ်း၏ အနှစ်သာရကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ပြီး “ငြိမ်းချမ်းရေးလိုငွေပြမှု”အား ဖယ်ထုတ်ပစ်ရေးအတွက် အခြေခံကျသောဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ်အား ပေးအပ်ထားကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China #Cambodia #BRICS #development #တရုတ်နိုင်ငံ #ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ #ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
BRICS countries contributor of global development — Cambodian scholar
Source: Xinhua Editor: huaxia 2022-06-20 22:52:30
“I believe that the summit’s outcome will benefit not only the BRICS countries but also other developing countries as well as the whole world,”aCambodian expert has said.
PHNOM PENH, June 20 (Xinhua) — The BRICS countries have significantly contributed to global development over the past 16 years,aCambodian expert has said.
“BRICS’ multilateralism is very important for today’s new world order,” he told Xinhua. “Since its inception in 2006, BRICS countries have been the key engines of global inclusive economic growth and have renewed impetus to global economic cooperation.”
Phea also underscored BRICS’s remarkable achievements including the establishment of the New Development Bank, known as the BRICS bank, and the recent launch of the BRICS Vaccine Research and Development Center.
“The summit is essential for the leaders of the BRICS members to forge stronger partnership in order to boost post-COVID-19 economic recovery and address key challenges to global economy,” Phea said.
“I believe that the summit’s outcome will benefit not only the BRICS countries but also other developing countries as well as the whole world,” the scholar said.
Speaking of China’s BRICS chairmanship, Phea believed that China will use the occasion to promote the BRICS spirit of openness, inclusiveness and win-win cooperation, strengthen practical cooperation in all fields, and embark onanew journey of BRICS cooperation.
“China isakey investor and trade partner in the BRICS bloc, and trade and investment cooperation between China and other BRICS countries exertsavery strong impact on the development of their economies,” he said.
“BRICS Plus reflects the true spirit of multilateralism and multiculturalism and can thus guarantee the survival of emerging markets and developing countries,” he said.
He added that the initiative carries forward the spirit of the United Nations Charter and providesafundamental solution to eliminating “the peace deficit.” ■
Photo 1 – Photo taken on Sept. 8, 2021 shows models of jets during an exhibition on BRICS New Industrial Revolution held in Xiamen, southeast China’s Fujian Province. (Xinhua/Lin Shanchuan)
Photo2– Aerial photo taken on Dec. 17, 2020 shows the headquarters building of BRICS New Development Bank (NDB) in east China’s Shanghai. (Xinhua/Fang Zhe)